E Bidoro Ịchọ Ihe Bara Ezigbo Uru | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Otú Ndị Dọminikan Ripọblik Si Mụta Gbasara Ụwa Ọhụrụ
Na Sọnde, abalị mbụ n’ọnwa Eprel, afọ 1945, otu di na nwunye gụrụ akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied, kwagara na Kiudad Trujilo. Ha bụ Nwanna Lennart Johnson na nwunye ya Virginia. Ha bụ Ndịàmà Jehova mbụ e nwere na Dọminikan Ripọblik. Ihe a na-akpọzi Kiudad Trujilo bụ Santo Domingo. Ọ bụ ya bụ isi obodo Dọminikan Ripọblik. Ihe e jikwa mara mba a bụ tigbuo zọgbuo. * Akwụkwọ Mgbaafọ nke 1946 kwuru banyere obodo a, sị: “Ebe a dị nnọọ mma ịnọ rụọ ọrụ ịsụ ụzọ, di na nwunye a ga-amalite ihe niile n’isi.” N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na e nweghị alaka ụlọ ọrụ ma ọ bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’obodo a. E nweghịkwa ọgbakọ na ya. O nwekwanụghị onye ụmụnna ndị a ma. Ha amachaghị asụsụ Spanish. Ha enweghịkwa ụlọ ma ọ bụ oche. Gịnị ka ụmụnna ndị a ga-eme?
Nwanna Lennart kọrọ ihe mere mgbe ha kwabatara. Ọ sịrị: “Anyị gara chọta ụlọ na Viktorịa Họtel. Ihe mụ na nwunye m na-akwụ ha n’ụbọchị bụ dọla ise. Ego nri anyị sokwa na ya. Ọ bụ n’ehihie ahụ anyị kwabatara ka anyị nwetara onye mbụ anyị malitere ịmụrụ Baịbụl. Lee otú anyị si nweta ya: E nwere ụmụ nwaanyị Dọminikan Ripọblik abụọ anyị na-amụrụ Baịbụl na Bruklin. Mgbe anyị na-aga Dọminikan Ripọblik, ha nyere anyị aha ndị ikwu na ibe ha. Otu n’ime ha bụ Dọkịta Green. Mgbe anyị gara na nke ya, anyị hụrụ ya na onye agbata obi ya aha ya bụ Moses Rollins. Mgbe anyị gwachara ha otú anyị si mata aha ha na ebe ha bi, anyị ziri ha ozi ọma Alaeze Chineke. Ha gekwara anyị ntị nke ọma, kwetakwa ka anyị na ha mụwa Baịbụl. Obere oge anyị na ha malitere ịmụ Baịbụl, Moses ghọrọ onye nkwusa mbụ e nwere n’obodo a.”
Na Jun afọ 1945, e zitekwuru ndị ozi ala ọzọ. Ha dị mmadụ anọ. Obere oge ha malitere izi ndị mmadụ ozi ọma, ha nyefere ndị mmadụ ọtụtụ akwụkwọ anyị, malitekwa ịmụrụ ọtụtụ ndị Baịbụl. N’ihe dị ka ọnwa Ọktoba, ọ bịara doo anya na ụmụnna anyị kwesịrị inwe ebe ha ga na-enwe ọmụmụ ihe. N’ihi ya, ha rụzigharịrị palọ ha na ebe ha na-anọ eri ihe ma jiri ha mere Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ihe dị ka mmadụ iri anọ na-abịakwa ọmụmụ ihe.
Otu n’ime ndị mbụ ghọrọ Ndịàmà Jehova bụ Nwanna Pablo Bruzaud. Ihe ndị mmadụ ji mara ya bụ Palé. O nwere ụgbọala ndị na-agbara ya n’ụzọ. Ọ na-esikarị na Santiago buru ndị mmadụ gaa Kiudad Trujilo, bụ́ isi obodo ha. Otu ụbọchị Palé nọ na Kiudad Trujilo, ya na ndị ozi ala ọzọ abụọ bụ́ Ndịàmà Jehova kparịtara ụka, ha enye ya akwụkwọ “The Truth Shall Make You Free.” Ya na ha malitere ịmụ Baịbụl kwa ụbọchị. Obere oge, ya esowe ha na-ezi ozi ọma. Ọ na-ebukwa ha n’ụgbọala aga ozi ọma. Ka oge na-aga, ọ hụrụ Nwanna Lennart Johnson. Ya na ya si Kiudad Trujilo gaa Santiago, sizie na Santiago gbafee ọtụtụ ugwu gaa Puweto Plata. Puweto Plata dị n’akụkụ osimiri. Ihe mere ha ji gaa obodo a bụ ka ha leta ndị nwere mmasị na-ezukọta ebe ahụ amụ ihe. Ndị a degaara isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin akwụkwọ ka ha nyere ha aka ịmụ Baịbụl.
Nwanna Knorr na Nwanna Franz Bịara Dọminikan Ripọblik
Na Mach afọ 1946, Nwanna Nathan Knorr na Nwanna Frederick Franz si n’isi ụlọ ọrụ anyị bịa Dọminikan Ripọblik. Ndị mmadụ nọ na-atụsi anya ha ike. Ụmụnna anyị na mmadụ iri asaa na ise nwere mmasị bịara gere okwu Nwanna Knorr. N’oge ahụ Nathan Knorr bịara, o mere ndokwa ka a rụọ alaka ụlọ ọrụ n’obodo a.
Ebe Nwanna Knorr na Nwanna Franz nọ n’ihu Ụlọ Nzukọ Alaeze mbụ e nwere na Dọminikan Ripọblik. Ọ dị na Kiudad Trujilo
E zitekwuru ndị ozi ala ọzọ na Dọminikan Ripọblik. Nke a mere na mgbe afọ ije ozi 1946 gwụrụ, e nwere ndị nkwusa iri abụọ na asatọ. Ebe ọ bụ na a ka malitere ikwusa ozi ọma n’obodo a amalite, ndị ozi ala ọzọ ahụ ji ọtụtụ mgbede hazie otú a ga-esi na-ezi ozi ọma n’ókèala ha ka ha nwee ike izi ozi ọma nke ọma ebe ahụ.
E Nwekwuru Ndị Nkwusa
N’afọ 1947, e nwere ihe karịrị ndị nkwusa iri ise na itoolu na-ezi ozi ọma na Dọminikan Ripọblik. N’afọ ahụ kwa, e si na Kuba zite ụfọdụ ndị ozi ala ọzọ na Dọminikan Ripọblik. Ụfọdụ n’ime ha bụ Nwanna Roy Brandt na nwunye ya Juanita. A họpụtara Nwanna Brandt ka ọ na-elekọta alaka ụlọ ọrụ. Ọ rụrụ ọrụ a afọ iri.
Mgbe afọ ije ozi 1948 gwụrụ, e nwere ihe dị ka otu narị ndị nkwusa na iri so ndị ozi ala ọzọ na-ekwusa ozi ọma. Ma, ndị nkwusa ndị a ji ozi ọma kpọrọ ihe amaghị na nsogbu kpụ ọkụ n’ọnụ ga-abịara ha n’oge na-adịghị anya.
^ para. 1 Mgbe mbụ e kesara akwụkwọ anyị na Dọminikan Ripọblik bụ n’afọ 1932. Ma, ọ bụ mgbe Nwanna Johnson na nwunye ya bịara n’obodo a n’afọ 1945 ka e bidoro kụziwere ndị nwere mmasị Baịbụl.
mailto:?body=Ihe A Chọtara%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015002%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe A Chọtara